Wasiirka duulista ee Soomaaliya oo maanta hortagaya aqalka sare ee baarlamaanka – Radio Daljir
Noofember 12, 2017 4:59 b 0
Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomaar Wasiirka gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu wadaa inuu Hortagaya Xildhibaanada golaha Aqalka Sare.
Wasiirka ayaa Xildhibaanada Aqalka Sare waxaa ay su’aalo ka weydiin doonaan cabsida ka jirta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyo sababta keentay in xiligan ay shaqaalaha laga mamnuuco inay soo galaan gudaha garoonka iyo xarunta xalinta ee Magaalada Muqdisho.
Xildhibaanada aqalka sare ayaa waxaa diyaariyeen su’aalo adag oo arimahasi la xiriiri,si ay wax badan wasiirka ugu weydiiyeen Arimaha garoonka aadan cadde ee Magaalada Muqdisho.
Amaanka Xarunta Aqalka Sare ayaa saakay aad loo adkeeyay waxana wadooyinka lagu arkayaa ciidamo ka tirsan kuwa dowlada fedelka soomaaliya.
Maalmo ka hor ayay aheyd markii warbixin ay ka soo baxday saraakiisha Ciidamada AMISOM ee maamulaha xarunta xalinta ee magaalada muqdisho,kaasi oo ku aadan in laga cabsi qabo in Al-Shabaab ay weeraro ka geystaan gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada muqdisho.
Hayee habeen ka hor ayay aheyd markii madaxweynaha Soomaaliya uu dadka qal-qal gelinaya amaanka magaalada muqdisho uu ugu baaqay inay arimahaasi ka fogaadaan,maadaama taasi ay dhibaato weyn ku tahay hay’adaha amaanka dalka.